RASMI: Arsenal oo dhammeystirtay saxiixa Martin Odegaard… (Muxuu yahay heshiiska ay kusoo qaadatay?) – Gool FM
(London) 27 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa ugu dambeyn si rasmi ah ugu dhowaaqday dhammeystirka heshiis amaah ah oo ay Real Madrid kaga soo qaadatay laacibka khadka dhexe ka ciyaara ee Martin Odegaard.
Kubadd sameeyahan dhallinta yar ayaa ku yimid Emirates Stadium heshiis amaah ah oo ku eg illaa iyo dhammaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo aysan heshiiska ku jirin inay si joogto ah ula saxiixan karto marka uu dhammaado heshiiska amaahda ah.
22-jirkan ayaa doortay Gunners isagoo iska diiday dalabaad kaga imaanayay kooxo kala duwan oo ka dhisan horyaallada waaweyn ee qaaradda Yurub.
Odegaard ayaa ku guuldarreystay inuu noqdo xubin muhiim u ah safka Macallin Zinedine Zidane, waxaana ay taasi ay keentay inuu helo waayo waqti ciyaareed ku filan.
Sidaas darteed, laacibkan reer Norway ayaa Los Blancos ka dalbaday inay fasaxdo si uu u helo naadi siin karta daqiiqado ku filan inuu garoonka ku jiro.
Inkastoo uu bandhig cajiib ah ka sameeyay naadiga Real Sociedad xilli ciyaareedkii la soo dhaafay isagoo amaah ugu ciyaarayay, misena Zidane uma uusan arkin xiddigan mid ku habboon dooqiisa koowaad.